नेपाली कांग्रेसको चुनावि गीत : ऐतिहासिक शब्द संगीत तर कमजोर प्रस्तुति - Ek Jamarko
Home / Unlabelled / नेपाली कांग्रेसको चुनावि गीत : ऐतिहासिक शब्द संगीत तर कमजोर प्रस्तुति
नेपाली कांग्रेसको चुनावि गीत : ऐतिहासिक शब्द संगीत तर कमजोर प्रस्तुति
नेपाली कांग्रेसको चुनावि गीत :
आदरणीय एकनारायण भण्डारीको शब्द सृजना र लय संयोजनको म ठुलो प्रसंसक हुँ । एमाले पार्टीको लागी एकनारायाण भण्डारीले लेखेको गीत यो युगले नविर्षने गरी कालजयी भएको सर्वविदितै छ । त्यस्तै ओजपुर्ण शब्द नेपाली कांग्रेस पार्टीको चुनावि गीतको लागी पनि एकनारायण सर ले कोर्नुभएको रहेछ -जसमा देशभक्ती,कांग्रेसको ईतिहास र वास्तविकता, वर्तमान अनि नेपाली कांग्रेसले जित्नुपर्ने कारण हरु समेत बडो साहित्यीक पाराले गीतमा उन्नुभएको रहेछ । गीतको संगीत संयोजन उत्कृष्ट बनेको छ भाका सरल,सरस र मिठो बनेको छ ..!
एकनारायण भण्डारीका सबै गीत हरु उत्कृष्ट नै हुन्छन ।वहाको शब्द र संगीतमा खोट लगाउने ठाउँ प्राय भेटिदैन । नेपाली कांग्रेसको लागि बनाईएको चुनावी गीतको पनि शब्द संयोजन जिउमा काँडा उमार्ने खालको लेख्नुभएको रहेछ भण्डारी ले । तर त्यो गीतमा प्रयोग गरिएको स्वर भने तिनै शब्द सुनेर उम्रेका जिउका काँडा थमार्ने खालको अनुभव गरें मैले : एक नारायण भण्डारीको शब्द शुनेर उम्रेका मेरा जिउका काँडा गायक गायीका को स्वर ले थमार्यो -ठिकै भो ! भिडीयो मेकिंग मन परेन त्यसरी टुंग पुच्छर नभेटिने भिडियो बनाएर कमजोर कोरियोग्राफी देखाउनु भन्दा एमालेको गीतमा झैं फोटो हरु मात्र घुमाएको भए खर्च जोगिन्थ्यो । मोडल हरुको काम निराजनक लाग्यो ! नेपाली कांग्रेसको चुनावी गीत समग्रमा भिडीयोमा कलाकारको प्रदर्शन र गायक गायीकाको आवाजले न्याय गर्न नसक्दा खासै ओजपूर्ण र ऐतिहासिक बन्न बाट चुकेको अनुभव मैले गरें । एकनारायण भण्डारीको यौटा ऐतिहासीक र कालजयी भएर चर्चित हुनुपर्ने यो गीत अनुमान गरे अनुरुप गुणस्तरीय बन्न सकेन ।
एमालेको गीतमा जसरी बद्री पंगेनीको आवाजले समग्र गीतलाई न्याय गरेको थियो कांग्रेसको गीतमा कलाकारको आवाजले गीत लाई त्यहि गुणस्तर दिन नसकेको जस्तो लाग्यो । सही आवाज चयन गर्न नसक्दा गीत कमजोर सुनियो । बिमलराज क्षेत्रीको आवाज चित्त बुझ्दो गरी जोशीलो पारामा आउन सकेन । “बरदान पाको भा, कति खुशी हुन्दोहो दुनिया मेरो साथमा तिमि भाको भा” यो गीत बिमल राज क्षेत्रिको ट्रेडमार्क जस्तै भएको कारण मायालु गीत या बिछोडका लामा लामा भाका भएका गीत हरु विमलराजको आवाज लाइ अत्यन्तै सुहाउछन ।
म दर्शक या श्रोताको रुपमा मेरो खोजि पनि त्यस्तै जोश पूर्ण गीत नै भएर होला राजनैतिक गीतमा क्षेत्रिको स्वरले मलाइ सन्तुष्टी दिन सकेन । ओजपूर्ण र भारि भरकम आवाज भएपनि उनको आवाजमा जोश भेटिएन त्यस्तै महिला कलाकारको अवाज पूर्ण रुपमा “तालु” बजेको मात्र सुनिन गएको छ । नाके स्वर राम्रो लाग्ने र मन पराउने श्रोता हरुको लागि यो गीतमा गायीकाको आवाज निकै सुरिलो लाग्न पनि सक्ला तर रुखमै मतदान को लागि मतदाता जनतामा जोश भर्न सक्ने खालको आवाज मलाइ लागेन । यस किसिमको प्रस्तुतिमा राजनैतिक अवस्था, चुनावी जोश, सामाजिक परिवर्तन, जगरुकता बढाउने गरि आवेग युक्त ध्वनि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो भन्ने मलाइ लाग्दछ । एउटा स्केलमा गाएर गीतको स्केल बढाएर माथि पुर्याउदा पुरुष स्वर मोटो भएको कारण ठिकै सुनिएपनि महिला आवाज सम्पूर्ण रुपमा कर्कस र अप्राकृतिक सुनिन पुग्यो !
समग्रमा शब्द सुन्दा जिउमा काँडा उम्रने गीत स्वर सुन्ने बित्तीकै जिउका काँडा मरेर आए ! भिडियो हेर्दा झन् बिरक्त लागेर आयो । नेता हरुको फुटेज प्रयोग बिरक्तालाग्दो र ढिलो देखियो । रामचन्द्र पौडेल ले नमस्ते गरेर भोट मागेको दृश्य झन् "कारुणिक" किसिमको देखियो । समग्रमा लामा लामा फुटेज हरुको प्रयोग र कमजोर कोरियोग्राफीले गीतको मर्म लाइ सम्बोधन गर्न नसकेको देखियो । यो गीत एमालेको सै पनि एमाले जस्तो भाइरल हुनेछैन ।
यी मेरा निजि बिचार हुन : गायक,गायीका या यो गीत संग जोडिनुभएका कुनै कलाकार संग मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन ।तपाईका आगामी प्रस्तुति हरु अब्बल सुन्न र देख्न पाइनेछ भन्ने आशा गर्दछु ।
नेपाली कांग्रेसको चुनावि गीत : ऐतिहासिक शब्द संगीत तर कमजोर प्रस्तुति Reviewed by Durga Pangeni on नवंबर 22, 2017 Rating: 5